DHIRTA ORCHID DHIRTA: DOORO KAN KA SII FIICAN - CAAG, DHOOBO AMA MURAAYAD WAA HUFAN, XITAA XAJMIGU WAA WEYN AMA YAR, IYO SIDA LOO SAMEEYO GACMAHAAGA? - SOOSAARKA DALAGGA
Kobaca iyo horumarka oo idil waa mid aan macquul ahayn iyada oo aan si sax ah loo dooran.
Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso xayiraadyada sida maaddada, cabbirka, joogitaanka godadka dheecaanka.
Ma ahan lagama maarmaan in lacag lagu isticmaalo iibsashada dhirta ubaxa, maadaama ay aad u fududahay in guriga lagu sameeyo.
Beeraha Orchid - weel wax ku leh muuqaal ka soo jiidasho leh dherer. Waxaad dheri ku dhejin kartaa orchids iyo dhir kale oo ku jira. Wixii soo saarida qalabka noocan ah waxaa loo isticmaalaa:
geed canab ah;
Maaddooyinka sida bacaha, birta, geed canab ah iyo qoryo ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo waxyaabaha ubaxyada gudaha, iyo inta kale - kuwa dibadda ah.
Cachepoons waxaa loo isticmaalaa labo ujeedo:
samee muuqaalka dheriga orchid ee soo jiidasho leh;
Ha u ogolaan biyaha dheeraadka ah in ay istaagaan ka dib waraabka, maadaama ay ku urursanayso haanta hadda jirta, halkaasna waxaa si sahlan u daadin kara.
Maxay ka duwan tahay dheriga?
Farqiga u dhexeeya dheriyada iyo dheriga ayaa ah sida soo socota:
Ujeeddo Dheriga wuxuu u adeegaa sidii weel lagu beerayo orchids iyo wax kasta oo dhirta ka baxsan dibedda ama gudaha. Dhuxulo loo isticmaalo ujeedo qurxinta.
Godadka nadiifka ah. Waxay ku jiraan dheriga, maadaama ay biyaha u wareejiyaan. Dukumintiyadu ma laha godadkaas.
Baahida loo qabo istaati dheeraad ah. Dhoobada dhererka, waa inaad ku rakibsataa fiilo si ay biyaha xad-dhaafka ah u soo degaan. Haddii aad isticmaasho dheriga, dareeraha dheriga ayaa si toos ah uga dhici doona.
Qalabka wax soo saar. Dheriga, dhoobada keliya ama caag ah ayaa loo isticmaalaa, qalabyo kala duwan ayaa ku habboon dheriyada.
Naqshad. Dhuxuladu marwalba waa la qabadsiiyaa, laakiin dheryaha ayaa lagu kala saaraa xarrago, asalnimo, muuqaal qurux badan sababtoo ah waxyaalihii farshaxanka ahaa.
Dhuxul looma isticmaali karo naqshada muuqaalka, iyo dheriyada ku haboon ee qurxinta meelaha bannaan.
Maxay muhiim u tahay in la doorto kartida saxda ah ee ubaxa?
Orchid waa warshad aan jeclayn biyo qashin.. Haddii aad dooratid alaabta qaldan, tusaale ahaan, ma haboon tahay, ka dibna biyo xad-dhaaf ah ayaa istaagaya, iyo nidaamka xididku wuu qudhmi doonaa. Sababtan awgeed, aeration ee nidaamka xididka iyo ciidda waa la ba'an yahay, iyo heerkulka ayaa isbedelaya.
Dhalo ama matag?
Qoyaannada orchid waxay noqon karaan kuwo hufan oo aan lahayn, sababtoo ah waa, dhab ahaantii, walxaha qurxinta. Laakiin dheriga waa inuu haystaa derbiyo hufan, iyada oo beeralayda ubaxa ay kormeeri karaan gobolka nidaamka xididka.
Tani waxay khuseysaa kiisaska dhererka lagu dhejin doono gudaha ubaxyada. Laakiin kaliya growers ubax qibrad awood u leeyihiin inay beerista ubax galaan alaabta galaas oo aan godad. Haddii uu jiro khibrad yar, ka dibna aan lahayn godad dheecaan, biyaha xad-dhaafka ah ayaa bilaabi doona inay istaagaan. Si loo beddelo orchid dheriga, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo diyaariyo substrate., iyo dheecaan ayaa la dhigayaa lakab qaro.
Haddii kale, sarrifka hawada ee gudaha dheriga waa la buuqi doonaa, algae wuxuu ka muuqan doonaa derbiyada, nidaamka xididku wuxuu u jajabinayaa sababtoo ah qalajinta aan qallajin ee substrate ah.
Dabeecadda, Orchid wuxuu ku koraa geedaha. Nidaamka xididkiisu wuxuu si joogta ah u joogaa hawada furan. Waxay ka helaan nafaqooyinka hawada. Tani waa in lagu xisaabtamaa marka la dhadhamiyo weel ku habboon geedka.
Markaad iibsato dheriyada dukaanka, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso cabbirka dheriga. Waa inay ahaataa 1-2 cm oo ballaadhan oo ka baxsan weelka ugu muhiimsan.
Haddii dheriga loo isticmaalo in lagu dhejiyo dheriga, markaas maaddadu waxay noqon kartaa wax kasta. Xaaladdan oo kale, waxay noqon doontaa kaalin labaad, doorka koowaadna wuxuu noqon doonaa cabbirka.
Haddii ubaxa uu leeyahay waayo-aragnimo ah sii kordhaya warshad kuleyl ah, ka dibna wuxuu isku dayi karaa in uu ku beeri dhirta hufan ee aan yareyn, laakiin yar yar, oo gebi ahaanba ka tagta dheriga.
Kaliya waxaa ku jira waa inay noqdaan darbiyo hufan si ay ula socdaan xaaladda nidaamka xididka. Way fududahay in aad ka soo qaadato orchid caag ah (ma aha qasab muuqda) sheyga marka loo eego mid ka mid ah dhoobada.
Xagee iyo intee ayaa la gadayaa?
Awoodda orchid waxaa laga iibsan karaa dukaanka ubax kasta ama lagu dalbado dukaan online ah.
Qiimaha celceliska caag balaastik ah waa 23 rux, iyo hal galaas waa 1000 ribo. Kala duwanaanshahan qiimaha leh waxaa sabab u ah qalabka kala duwan ee wax soo saar, joogitaanka ama maqnaanshaha walxaha samaynta.
Waxaan gacmaheena samaynaynaa
Ma ahan wax walba oo lagama maarmaan ah si loo iibsado dheriga for orchid, maadaama ay tahay mid macquul ah si aad u sameyso.
Awooda shaqsigu waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
wuxuu buuxiyaa dhammaan shuruudaha geedka;
dareere ah kuma xirna weelka aad adigu sameysey, sida aad ka dhigi kartid dusha hoose ee naftaada;
Waxaad samayn kartaa dheriyo adiga oo isticmaalaya alaabta wax lagu duubo oo isku dhafan leh gudaha qolka.
Faa'iido la'aanta habkani waa in qof kastaa uusan dulqaadan doonin inuu ku dhejiyo gacmo gaar ah.
Isbarbardhigida xulashada dukaanka
Dhirta la iibsaday waxay leeyihiin muuqaal aad u qurux badan, laakiin waa kuwo aan sax ahayn. Waxay heystaan ​​godho dheeri ah. Weelasha ay iyagu samaysteen waxay si buuxda ugu hoggaansamaan shuruudaha geedka, sida uu isagu naftooda u buuxiyo.
Waxa ugu horeeya ee aad u baahato inaad doorato maadada. Inta badan isticmaal balaastik. Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad raacdo talaabooyinka soo socda:
Go'aami xajmiga taangiga. Si tan loo sameeyo, qiyaas cabbirka dhexda dheriga hadda jira oo leh taliye. Ka dibna ku dar qiimaha ay soo baxday 1-2 cm, taasi waxay noqon doontaa dhexroorka awooda mustaqbalka.
Go'aami naqshadda mashiinka. Haddii balaastig loo isticmaalo si loo sameeyo weel, markaa waxaa jira fursado balaaran oo loo maleeynayo. Waxaad samayn kartaa dheriyo ah midabyo iyo qaabab kala duwan. Waxaad isticmaali kartaa awoodda suugada, majones, majones.
Isticmaal foorno ama feerjeeriye, samee godad ku jira weel caag ah. Inta badan, iyaga ka fiican. Qalabka waxaa laga samayn karaa derbiyada dhinaca.
Si loo hagaajiyo isbeddelka hawada markabka, ku rid shaambe champagne hoose ee weelka. Tani waxay ka hortagi doontaa qulqulka taam ah ee xididada hoose.
Waxaad qurxin kartaa badeecadda adiga oo ku saleynaya go'aankiina, adoo isticmaalaya qalabka sida sida geedo, caws, jilib, iyo sharaab.
Haddii aad qalad samaysay iibsashada
Haddii ay khalad tahay in la doorto dhirta for orchid, ka dibna xididdada geedka bilaabaan in qudhmiNatiijo ahaan, algae ama lafaha ayaa ka sameysan derbiyada taangiga. Haddii aan wax talaabo ah la qaadin, ubaxu wuu dhimanayaa.
Dharka ama orchid waxaa loo isticmaali karaa ma aha oo kaliya ujeedo madaxtooyada, laakiin sidoo kale beerto. Kaliya kiiska labaad, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uhesho xulashada kartida, adoo tixgelinaya ma aha oo keliya maaddada, laakiin sidoo kale cabbirka. Waxyaabaha farshaxanka ah waxay cayaari karaan oo kaliya door yar.